Amaala Antigua na Barbuda - Mahadum nke West Indies (UWI) ezinụlọ Fund
Mahadum nke West Indies Fund (UWI) nhọrọ bụ usoro iji kwado ego UWI nke nwere ogige nke anọ nwere ọdịda.
Ndị ga-achọ itinye akwụkwọ maka ụmụ amaala site na ntinye ego nke na-ahọrọ nhọrọ a ga-achọ itinye ego nke US $ 150,000 maka ezinaụlọ nwere mmadụ isii (6) ma ọ bụ karịa (ya bu na onu ogugu ndi mmadu pere mpe bu 6).
Ntinye na nhọrọ a ga - eme ka otu onye ezin’ụlọ nweta otu afọ, agụmakwụkwọ naanị, gụsịrị akwụkwọ na Mahadum West Indies.
Usoro ntinye ngwa ga-akwụ ọtọ ma nweta akwụkwọ anamachọihe sitere na ikike ndị enyere ikike ime obodo, nke ndị ikike sitere n'aka ndi amaala amaala (CIU) nyere ikike.
Ozugbo etinyere akwụkwọ anamachọihe gị, a ga-agwa gị ka ịkwụsi ọrụ ike oge niile. Paymentkwụ ụgwọ 10% nke ego nhazi ahụ bụ maka ezinaụlọ mmadụ asaa (7) ma ọ bụ karịa. Mgbe inwetara leta nkwado, aga agwa gi ka itinye ego nke ego nhazi gọọmentị, ụgwọ paspọtụ na onyinye gị. A na-akwụ ụgwọ ahụ ozugbo na Ngalaba ahụ, a ga-enwerịrị enyemaka gị na Gọọmentị Pụrụ Iche iche n'ime oge 30.
Ozugbo enwetara, a ga-enye asambodo idebanye aha maka ụmụ amaala na ndị ezinaụlọ ha nke a ga-enyefe akwụkwọ ikike ngafe maka akwụkwọ yana akwụkwọ paspọtụ ha na akwụkwọ ọ bụla na-esonye. Emechaa, onye nnọchi anya gị / onye nnọchi anya gị ga-edetara gị akwụkwọ ikike ngafe na hipmụ Amaala.
Na oge mbụ ị gara Antigua na Barbuda, ị ga - a takeụ iyi ma ọ bụ ikwenye nkwenye ma ọ bụ ịnwere ike ịga ụlọ ọrụ nnọchite anya ndị nnọchianya, High Commission ma ọ bụ ọfịs nke Antigua na Barbuda iji mezuo ihe achọrọ iji theụọ iyi ma ọ bụ nkwenye nke nkwenye.
Onyinye nke Mahadum West Indies (UWI) Fund
A. Maka ezinụlọ nke 6: -
Ihe onyinye US $ 150,000 (nke gunyere nhazi nhazi)
B. ezinụlọ nke 7 ma ọ bụ karịa: -
US $ 150,000 onyinye
Ego Nhazi: US $ 15,000 maka mgbakwunye ọ bụla
Alaghachikwuru ụmụ amaala Antigua na Barbuda